Taphattoota kamtuu garee cimaa pirimeerliigii torban kanaa keessa filatame? - BBC News Afaan Oromoo
Taphattoota kamtuu garee cimaa pirimeerliigii torban kanaa keessa filatame?
Injifannoon Maanchistar Siitiin Istook Siitii irratti 7 fi 2 gonfatan kan ajaa'ibaa fi qabxii lamaan Pirimeerliigii akka dursan isaan taasiseera.
Tapha Siitii dura morkataan isaanii Yunaayitid Anfiild irratti 0-0 walqixa yoo ba'an, Chelsiinis haala hin eegamneen Kiriistaal Paalaasiin 2-1 mo'aman. Paalaas injifannoo qofaa osoo hin taane, galchiiwwan jalqabaa kan bara kanaas achumarratti lakkoofsisani.
Waatfordis adeemsa bareedaa qaban Arsenaaliin 2-1 injifachuun yoo itti fufan, morkataan isaanii Tootanhaam ammoo 1-0 Boornimaawuziin mo'uun 3ffaarra turuu danda'aniiru.
Iswaansiin Haadersfiild 2-0 yoo injifatu, Barnileey, Biraayitan fi Saawuzampitan ammoo walqixa ba'ani.
Kun garee cimaa xinxalaa kubbaa miilaa BBC Gaarz Kiruukin filatame dha. Isin eenyuun filattu?
Karra eegaa - Deevid de Hiiyaa (Maanchistar Yunaayitid)
Goodayyaa suuraa Karra eegaan kamiyyuu isa caalaa kubbaa hin qolle (kubbaa 5) bara kanatti galchiin osoo itti hin lakkaa'amin taphoota 7 turuunis kan isa bira ga'e hin jiru.
Yoo Piriimeerliigii injifachuu barbaadde, sana gochuuf karra eegaa cimina guddaa qabutu si barbaachisa, Deevid de Hiiyaan ammoo sadarkaa kana akka qabu waliigalla jedheen yaada.
Kubbaa inni Jooyel Maatiipp irraa miilaan qole kan hin amanamne ture.
Taphattoonni sarara fuulduraa karra eegaan kubbaawwan ciccimoo yoo fashaleessu ni sodaatu - Yunaayitid qabxii 1 Anfiild irraa fudhatee akka deebi'u kan taasiseenis kanuma.
Ittisaa - Fiil Joons (Maanchistar Yunaayitid)
Goodayyaa suuraa Anfiilditti Joons caalaa taphataan kubbaa qole hin jiru (kubbaa 7)
Maarkas Raashfoordiif Huwaan Maaataa yeroon teessoo jijjiirraa irratti argu, Mooriiniyoon isaan malee qabxii argachuuf karoorfatani jedhee yaadeen ture.
Haa ta'u malee, wanti natti tolaa jiru Fiil Joons tapha hundarratti fooyya'aa dhufuu isaati.
Taphattoonni ittisaa taphattoota sarara fuulduraa irratti danqaa ta'an ittistoota ciccimoo dha, Joonsis tibbana kanuma hojjechaa jira.
Ittisaa - Per Martesaakar (Arsenaal)
Goodayyaa suuraa Martesaakar guyyoota 1,400 booda Waatford irratti goolii jalqabaa lakkoofsisuun alatti kubbaa 3 fashaleesseera, tapha sanarratti sana kan godhe ammoo isa qofaa dha
Yeroo hedduu garee mo'amerraa taphataa ittisaa hin filadhu garuu kanarratti waan addaa gochuun fedha.
Tapha Istaadiyeemii Viikaarej Rood irratti taasifameen taphataan ittisaa-gidduu Arsenaal sochii bareedaa taasisuun Aleeks Iwoobii gara mirgaatti baasee ture.
Kan hedduu na dinqee ture ammoo Martesaakar irraa qofa sochiin akkasii mullachuu isaati.
Taphataan kun baay'ee cimaa dha. Baay'ee of hin agarsiisu, moodeela gaaris ni ta'a.
Ittisaa - Maamaaduu Saakoo (Kiriistaal Paalaas)
Goodayyaa suuraa Dhibbeentaan injifannoo Paalaas Saakoo waliin %50 (tapha 4 keessaa 2) yoo ta'u isa maleemmoo %17 (tapha 6 keessaa 1) qofaa dha
Taphataan kun Kiriistaal Paalaasiif hedduu murteessaa dha. Bara darbees kophuma isaa kilabii kana tajaajilaa ture jechuun ni danda'ama.
Deeggartootaaf oduu gaarii kan ta'u ammoo, taphataan kun dhaabbiin warra Risaaf mallatteesseera.
Garee Chelsii, kilaboota liigicha dursaa jiran qaqqabuuf tattaaffatan waliin yoo taphatanis, Maamaaduu Saakoo cimina isaa barameen Michiiy Baatshuwaayiin salphumaan harka kennisisseen.
Utubaa- Jooy Goomeez (Liivarpuul)
Goodayyaa suuraa Taphoota Goomeez irratti hiriire jalqabe 10 keessaa Liivarpuul irratti galchiin hin lakkaa'amne
Tapha Yunaayitid waliin taasisan irratti akka taphataa Liivarpuul Jooy Goomeez cimina agarsiise hin turre.
Taphataan lammii Ingilaand kun gidduu ittisaarras ta'e sarara gidduu irratti taphachuu ni danda'a.
Maarshiyaaliin taphaan ala gochuurra darbee Maarkas Raashfoord jijjiiramee yoo seenu danqaa itti ta'uun Liivarpuul caalmaa taphaa akka fudhatu taasiseera.
Utubaa- Keevin de Biruuyine (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Erga Pirimeerliigii keessatti taphachuu eegalee, galchiiwwan 32'f kubbaa mijeessee kennuun kan itti qixxaatu hin jiru.
Taphataan Beeljiyam kun sochii sadarkaa Ziinaddiin Ziidaaniin gitu mullise.
Kubbaan Lerooy Saaneef mijeessee kenneef goolii lammataa ta'uun galmoofte, kubbaa deeggartoota walitti qabaman afuura kuuttu dha.
Kubbaa galchii 4ffaa taate Gaabri'eel Hesuusiif mijeessee kennees kan caalu arguun rakkisaa dha.
Utubaa- Toom Kileevarli (Waatford)
Goodayyaa suuraa Kileevarli Eebla 2016 booda galchii jaqabaa lakkoofsisuun Waatford daqiiqaa 90ffaa irrati injifannoo akka argatu godheera
Taphataan fuulduraa Waatford Tirooy Diineey, Kileevarlin tapha Arsenaal qofaa irratti osoo hin taane, bara kana guutuu kilabicha keessatti taphataa cimaa ture jechuunsaa sirrii dha.
Taphataan Maanchistar Yunaayitid fi Evartan duraanii amma Waatforditti cimee jira.
Utubaa - Raahiim Istarliing (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Istarliing taphoota 6 darban irratti gooliiwwan 8 keessaa harka qaba (6 lakkoofsisuun 2 ammoo mijeessee kennuun)
Istarliing goolii fuulduratti yeroo dhiphatu beekama ture, kana booda waan ta'u hin fakkaatu.
Gaardiyoolaan taphataan kun sarararra taphachuu akka hin qabne murteessuun taphataan kun tasgabbaa'ee akka cimina isaa baasu godheeraan.
Jifataa - Gabri'eel Heesuus (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Gabri'eel Heesuus daqiiqaa 1,130 qofaa keessatti galchii 13 lakkoofsisuu fi 5 mijeessee kennuun Pirimeerliigii keessatti giddugaleessaan daqiiqaa 63 keessatti galchii irratti hirmaachaa jira
Siitiin Ronaaldoo isa biraa argachuu hin oolanu. Sochiin isaa akkuma taphataa Biraaziil fi Riyaal Maadriid duraaniiti, iji inni galchiif qabus akkasuma.
Umurii 20'tti, abjuu Siitiin waancaa sadarkaa Awurooppaa argachuuf qaban dhugoomsuuf cimina guddaa nama qabu fakkaata.
Kubbaa kilaboonni kan biroo yaaduu qofa danda'an taphachuun isaanii deeggartoota Yunaayitid ollaa isaanii jiraniif yaaddoo ta'uu hin oolu.
Jifataa - Tirooy Diineey (Waatford)
Goodayyaa suuraa Diineey taphoota lama Arsenaal waliin walitti aansuun taphatan irratti galchii lakkoofsiseera
Arsenaal akkamitti Vikaareej Rood irratti moo'ame?
Injifatamuun Arsenaal kun jijjiirraa Maarkoo Siilvaa, Diineeyiin taasisan irratti kan hundaa'e dha. Kubbaa Diineey mataan rukute fi rukuttaa peenaalitii Niil Siwaarbiikiin kennames shoora qabu.
Daqiiqaa muraasaaf dirree keessa turus, kubbaan haala miidhaguun Piitar Cheek irra dabartee saaphanaan wal simsiisuun isaa hedduu dansaa ture.
Jifataa - Wiilfireed Zaahaa (Kiriistaal Paalaas)
Goodayyaa suuraa Zaahaa'n galchii injifannoo Paalaas Chelsii irratti gonfatee lakkoofsise
Tapha baay'ee dansaa - miidhamarraa reefuu deebi'uu isaati - Paalaas hanga yoonaatti ariitii lammii Ayivooriikoost kana dhabee ture jechuu dha.
Yoo xiqqaate yeroo lama Deevid Luwiizin hedduu dhiphisee ture, itti fufees sochii cimaa dirree keessatti agarsiise.
Paalaas, keessumaa Zaahaan haala akkasii keessa yeroo jiraatan wanti hunduu ni danda'ama. Dirree gaarii, deeggartoota gaarii.
Tilmaama taphoota pirimeerliigii Ingilizii torban kanaa: Livarpuulimoo Yunaayitid?